Aqoontiisa Ayuu Xalka Ku Keenay! - Xogside
Home BARNAAMIJYADA Aqoontiisa Ayuu Xalka Ku Keenay!
Aqoontiisa Ayuu Xalka Ku Keenay!
Markabka waxa ku dhacay cillad xaga mashiinka ah , waxaana loo yeedhay dhamaan khubaradii shaqadaasi lagu yaqaanay, laakiin midkoodna umay suurtagelin inuu cilladaasi mishiinka ka saaro.
Laakiin waxa markii danbe yimi oday da’ ah oo wakhti hore Doonyaha mishiinadooda ka shaqayn jiray. Kabtanka Markabka isagoo aad ula yaaban da’da iyo itaal darada ka muuqata oo aan rajo ka qabin ayuu samee yidhi.
Odaygu wuxu sitay sanduq yar waxaana uu kala soo baxay dube yar oo uu dhowr jeer ku garaacay meeshi ciladdu ku jirtay. Waxaa yar ka dib markiib waxa hagagay mishiinka, odayguna wuxu dubihiisa ku ceshaday shandadiisa yar.
Odayga ayaa la siiyay lacag dhan 10 ku doller. Waxa ahayd DUbaha oo 2 doller iyo 9998 oo ah qiimaha aqaoontiisa. Dadaalku waa muhiim laakiin inaad garato halka aad ku bixinayso dadaalka ayaa ka muhiiman.
Previous articleAbuurka Adaamigu waa In Badbaadin La Helo
Next articleQof kasta Oo Usoo Guura wuxu helaya Guri Iyo Shaqo